“ရွာက ရှင့်ညီမ ဆီက စာ လာတယ်​”
“ဟာ ပြဿနာပဲ။ ငါ့ မျက်​မှန်​ ကွဲ​နေတာ အသစ်​မလဲရ​သေးဘူး။ ဒီလိုလုပ်​ကွာ မင်းငါ့ကိုဖတ်​ပြ”
“မဖြစ်​နိုင်​ပါဘူး​တော်​။ ရှင့်​ညီမက စာ​ရေးရင်​ ​တောင်​တစ်​လုံး၊​
မြောက်​တစ်​လုံး။ကျမကလည်း သူငယ်​တန်းစာ​တောင်​ နှာနှပ်​သင်​ထားရတာ”
“ငါက မြို့ထဲသွားမှ မျက်​မှန်​ဝယ်​ရမှာ။ ရပါတယ်​ကွာ။ အဆင်​​ပြေ​အောင်​ နား​ထောင်​ရမှာ​ပေါ့”
“ရှင်​ဖတ်​ပြဆိုလို့ ဖတ်​ပြမှာ​နော်​။ပြီး​တော့မှ အရင်​တစ်​ခါတုန်းကလို
“ပြီး​ရော။ အဟမ်း ဖတ်​ပြီ။ သို့…. ခိုချီးနေ​ကောင်းလား”
“ကိုကြီး​နေ​ကောင်းလား ​ဟုတ်​ပြီ။ ဆက်​ဖတ်​”
“ဘုန်​ကြီး လည်း ခိုချီးကို​မျှော်​​နေတယ်​”
“ဘုန်းကြီး လည်း ကိုကြီး ကို​မျှော်​​နေတယ်​”
“အပျိုကြီး လာတုန်းက ခြင်​​ထောင်​ထဲ ငှက်​ပျောသီး​တွေ ထည့်​​ပေးလိုက်​တယ်​
“အပျိုကြီး လာတုန်းက ခြင်း​တောင်းထဲ ငှက်​​ပျောသီး​တွေထည့်​​ပေးလိုက်​တယ်​။ လက်​​ဆောင်​ ထည့်​​ပေးလိုက်​တာ ​ပြောတာ​​ပေါ့။ ဖာ​ကောင်းမရှိလို့ အင်း သူ့ဆီမှာ
ထည့်​​ပေးစရာ ဖာ​ကောင်း ​ကောင်းမရှိလို့​နေမှာ”
“​ရှေ့အပတ်​ ကျယ်​မလာဖို့ လုပ်​ကြည့်​​သေးတယ်​ နာလို့ မရဘူး”
ရှေ့အပတ်​ ကျွန်​မလာဖို့ လုပ်​ကြည့်​​သေးတယ်​ နားလို့မရဘူး။
“ကျယ်​မ သားက​ ရယ်​​လိုက်​ရင်​ ​မေ့လုံး​လေး ပ​လေကပ်​ ပ​လေကပ်​နဲ့”
“ကျွန်​မသားက​ ရယ်​လိုက်​ရင်​ မျက်​လုံး​လေး ​ပေကလပ်​​ ပေကလပ်​နဲ့”
“ခိုချီး ဝက်​တွင်းထဲလူးချင်​ရင်​ လာခဲ့​လေ”
“ဟာ ဘယ့်​နှယ့်​ ငါ့ကို ဝက်​တွင်းထဲလူးခိုင်း​နေတာတုန်း။ ဪ
ကိုကြီး ဝါတွင်းထဲလှူချင်​ရင်​လာခဲ့​လေ။ အင်း ​တော်​ပါ​သေးရဲ့”
“​ဪ..ခွေးမသား​လေး​ ကောင်​​ပေါက်​တယ်​​တော်​။ ဒီလို​နေမှာပါ
“​​စောက်​တုန်းက မ​အေလိုး ညည အပြင်​ထွက်​အိပ်​တယ်​”
“​တောက်​ ငါ​နော်​ ရူးချင်​လာပြီ ဟင်း။ ​စဉ်းစားစမ်း..စဉ်းစားစမ်း
ဪ ​ဆောင်းတုန်းက မ​အေးလို့ ညည အပြင်​ထွက်​အိပ်​တယ်​။
ဟူး ​တော်​​သေး​တာ​ပေါ့ ဆက်​ဖတ်​”
“​မေ့လို့ မြို့ထဲ​ရောက်​ရင်​ လိုးရှင်းဝယ်​ခဲ့။
​တောက်​….​တော်​ပါ​တော့ ​ဘော်​စမန်​မရယ်​ နင့်​ဆက်​ဖတ်​ခိုင်းရင်​
ကို သာ​အေး သည်​ သူ့ မိန်းမ အား ပိတ်​ကန်​လိုက်​​လေ​တော့သည်။
လူ ၏ မိုက် မဲ မှု သည် စကြာ ဝဠာ ထက် ကြီး ကျယ် ၏
''မတိုင်းတာ နိုင် တဲ့ ကိစ္စ နှစ် ခု ရှိ တယ်။ အဲဒါ တွေ က တော့ စကြာဝဠာ
နဲ့ လူ သား တွေ ရဲ့ မိုက် မဲ မှု ဖြစ် တယ်။
ဒါ ပေ မဲ့ စကြာ ဝဠာ ကို တိုင်း တာ လို့ မ ရ ဘူး ဆို တာ ကျွန် တော့် အ
တွက် မ သေ ချာ ပါ ဘူး။
လူ တွေ ရဲ့ မိုက် မဲ မှု က တော့ တိုင်း တာ လို့ မရ တာ သေချာ ပါ တယ်။''
(အိုင် စ တိုင်း)
ရေးသားသူ Unknown No comments :
အရက္ခ ဖောင် ဒေး ရှင်း (မြေပုံ)ပညာဒါန ယာယီ ကျောင်း ဆောက် လုပ်
လူ့ ဘောင် တစ် ခု ကို တည် ဆောက် ရာ မှာ သဘာဝ သယံဇာတ အရင်း
အမြစ် က အ ရေး ကြီး သ လား၊ လူ့ အရင်း အမြစ် က အ ရေး ကြီး သ
လား လို့ မေး ခဲ့ ရင်...လူ့ အ ရင်း အမြစ် က အ လေး သာ ပါ လိမ့် မယ်။
လူ တော် တော် များ များ က ရင်း နှီး မြှုပ် နှံ မှု လို့ ဆို လိုက် တာ နဲ့ စက်
ရုံ ကြီး တွေ၊ ထုတ် လုပ် မှု တွေ၊ ကူး သန်း ရောင်း ဝယ် မှု တိုး တက် ဖွံ့ ဖြိုး
မှု တွေ ကို မြင် ယောင် ကြ တယ်။
.....လူ ငယ် တွေ ကို စာ သင် ပေး ခြင်း ဟါ နိုင်ငံ တော် ဖြစ် တည် မှု အ
တွက် တကယ့် ရင်း နှီး မြှုပ် နှံ မှု တစ် ခု ဆို တာ ကို မ ခံ ယူ တတ် ကြ
သေး ပါ ဘူး။
......ပညာ သင် ကြား ခြင်း ရဲ့ ရည် ရွယ် ချက် က လူ ငယ် များ သွား လို
တဲ့ လမ်း ကို အသိ ရှိ ရှိ နဲ့ လျောက် နိုင် ဖို့ ဖြစ် ပါ တယ်။
......ပြဿနာ က ဒီ လို ရည် ရွယ် ချက် ကို အ ကောင် အ ထည် ဖော် ဖို့
နိုင် ငံ တော် က တာဝန် ပေး လိုက် တဲ့ ပညာ ရေး ဝန် ထမ်း တွေ ရဲ့ ခံ ယူ
ချက် တစ် မျိုး တစ် မည် ကြောင့် က လေး ငယ် တွေ ရဲ့ နာ ခံ သင် ကြား
မှု တွေ ဟါ ဝမ်း နည်း ဖွယ် ကောင်း လောက် အောင် ရည် ရွယ် ချက် နဲ့
သွေ ဖီ သွား ခဲ့ ရ တယ်။
.....ဆိုင်း စမ်း ရင်း မိုး လင်း ခဲ့ ရ တဲ့ မြန် မာ့ ပညာ ရေး စ နစ် တွေ ဟါ
ပတ်မကြီး ဖောက် ထိုး ခဲ့ သူ တွေ များ လာ သည် နှင့် အမျှ လက် တွေ့ ဘဝ
နဲ့ ကင်း ကွာ လာ ခဲ့ သည်။
....ဒါ တွေ ရဲ့ ပြယုဒ် က တော့....ဘက ကျောင်း တွေ ပေါ် လာ ရ တယ်၊
ပညာဒါန ကျောင်း တွေ ပေါ် လာ ရ တယ်။
....လူ တိုင်း မှာ ထမင်း စား ဖို့ ပါးစပ် ပါ ပါ တယ်။ နိုင်ငံ တော် က ခန့်အပ်
ထား တဲ့ ပညာ ရေး ဝန် ထမ်း တွေ မှာ လည်း ပါးစပ် ပါ ကြောင်း မြင် တွေ့
ရ ပါ တယ်။ ကိုယ် ချင်း လည်း စာ ပါ တယ်။
.....ပြဿနာ က ပါး စပ် တွေ က ချို၊ချဉ်၊ငံ၊စပ် တွေ ကို အဆက် မပြတ်
ဝါး နေ ရ ဖို့ ....ကျောင်း သား မိဘ တွေ ခမျာ မှာ လည်း ..ဖင် ကို ရွှံ့ ဝင်
အောင် အဆက် မပြတ် အလုပ် လုပ် နေ ရ ပါ တယ်။
.....ကဲ...ချို ချဉ် ငံ စပ် ဖိုး ကို မ ပေး နိုင် သူ တွေ ကို ကော ရှေး ဘဝ က
ဝဋ် ကြွေး ပါ လို့ ခံ ရ တာ လို့ ကျော ခိုင်း သွား မ လား။ ဒါ မှ မ ဟုတ်....
မိမိ တို့ ရဲ့ အချိန် နဲ့ ငွေ ကြေး ကို ဒီ က လေး တွေ အ တွက် ပေး ဆပ် မှာ
လား ဆို တဲ့ မေး ခွန်း တွေ က ပေါ် လာ ပါ တော့ တယ်။
.....မြေပုံ က အာရက္ခ ပညာ ဒါ န ကျောင်း က တော့ နှပ် ချီး လူး နေ တဲ့
သူ ငယ် တန်း မှ နဝမ တန်း အထိ အခမဲ့ အချိန် ပိုင်း သင် ပေး တဲ့ ကျောင်း
လို့ သိ ရ ပါ တယ်။
ဆို လို တာ က ကျောင်း ကြီး(အစိုးရ ကျောင်း) လည်း တက်၊ ကျူရှင် မယူ
နိုင် သူ တွေ က တော့ အာရက္ခ မှာ လာ တက် ပေါ့။
.....ဒါ က နိုင် ငံ တော် ရဲ့ စီ မံ ခန့်ခွဲ မှု ယို ပေါက် တွေ ကို တစ် နည်း
နည်း နဲ့ ဖြည့် ဆည်း ပေး ခြင်း ဖြစ် တော့ ကျေးဇူး တင် စ ရာ ပါ။
လူ့ လော က မှာ လူ တွေ ဟါ မိမိ ရဲ့ ဘဝ ရပ် တည် ဖို့ အ တွက် မိမိ ၏
ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ရင်း ပြီး ....မ သင့် တော် တဲ့ ကိစ္စ ရပ် တွေ ကို လုပ် တတ်
ကြ ပါ တယ်။ ဥ ပ မာ...ပညာရေး လောက မှာ..ကျူရှင် ယဉ် ကျေး မှု
ထွန်း ကား လာ ခြင်း၊မေး ခွန်း များ ယို ဖိတ် ခြင်း၊စ တဲ့ ကိစ္စ ရပ် တွေ ကို
ဂျာနယ် တွေ၊ စာ စောင် တွေ မှာ ဖတ် နေ ရ တယ်။
ဘယ် လို ကု စား ရ မှာ လဲ။ ဝန်ထမ်း လစာ တွေ လည်း တိုး လာ ပြီ။
အဆင် ပြေ ပြီ လား။ ....ထား ပါ တော့....မိမိ ရဲ့ ဂုဏ် သိက္ခာ ကို ငွေ ကြေး
နဲ့ ဘယ် သူ ရောင်း ချင် မှာ လဲ။သနားစရာပါ။
အခု...မြေပုံ အာရက္ခ က တော့ နိုင် ငံ တော် ရဲ့ ရင်း နှီး မြှုပ် နှံ မှု ကို တစ်
နည်း နည်း နဲ့ ထောက် ပံ့ ပေး နေ ခြင်း ကို ကျေးဇူး တင် ပါ ကြောင်း ပြော
လိုက် ပါ ရ စေ လေ။
C R E D I T to ...... https://www.facebook.com/mthan.shwe/posts/1576892652567178
G6PD (အင်ဇိုင်း) ချို့ယွင်းနေတဲ့ ရောဂါ နှင့် မွေးကင်းစ ကလေး
ကျွန်တော့်သားလေးရဲ့ အခြေအနေလေးနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလို့ Dr. တင့်ဆွေ ဆီကနေ ပြန်ပြီးမျှဝေလိုက် ပါတယ်။
Q: ကျွန်မရဲ့သားလေးကို ဒီလ ၁၈ ရက်နေ့က ခွဲပြီး မွေးပါတယ်။ ကျွန်မသားလေးမှာ G6PD (Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency) ဆိုတဲ့ဟာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အသားဝါလည်းဖြစ်လို့ ဆေးရုံမှာ ၅ ရက်လောက် နေခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ G6PD အကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးပါနော်။ ဒီမှာ မလေးလို ရေးထားတဲ့ လက်ကမ်း ကြေငြာလေးနဲ့ပဲ ဆရာဝန်တွေက ရှင်းပြပါတယ်။ (အသေးစိတ်မရှင်းပြပါဘူး)။ တောင်ကြီးပဲ၊ ပရုတ်လုံးနဲ့ တိုင်းရင်း-ဆေးတွေကို ရှောင်ပါလို့ပဲ ပြောပါတယ်။ ဘယ်လို တိုင်းရင်းဆေးတွေကို ရှောင်ရပါမလဲဆရာ။ မီးနေသည်တွေ သုံးတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးတွေရော ပါပါသလား။ အဲဒီ G6PD က ကလေးအတွက် အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါသလား။ အဲတာ ရှောင်ရန်-ဆောင်ရန် လေးတွေကို ရှင်းပြပေးပါနော်။
မွေးကတည်းက G6PD (အင်ဇိုင်း) ချို့ယွင်းနေတဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘ တဦးဦးကဖြစ်ဖြစ် ၂ ဦးလုံးက ဖြစ်ဖြစ် မျိုးဗီဇ ရလာလို့ သူ့ X chromosome မှာ လာထိခိုက်တယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာ သန်း ၄ဝဝ ဖြစ်နေတယ်။ ငှက်ဖျား ရောဂါ ရှိတဲ့ နေရာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။ များသောအားဖြင့် ကလေးတွေမှာ ဒီရောဂါရှိနေတာ မသိကြဘူး။ ကလေး ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ဒီလိုရှိနေတာ သိသူတွေက ကံကောင်းကြပါတယ်။
သွေးအားနည်းနေပြီး ၁ဝ% အောက်မှာသာ အလုပ်လုပ်နိုင်သူ။
သွေးအားနည်းတာ ဖြစ်လိုက်-သက်သာလိုက်နဲ့ ၁ဝ% အောက်မှာသာ အလုပ်လုပ်နိုင်သူ။
သွေးအားနည်းတာ တခါတလေသာ ဖြစ်ပြီး ၁ဝ-၆ဝ% အလုပ်လုပ်နိုင်သူ။
အများအားဖြင့် ဘာရောဂါ လက္ခဏာမှ မပြဘဲ နေတတ်တယ်။ လက္ခဏာ ပြလာသူတွေက ယောက်ျားလေးတွေသာ ဖြစ်တယ်။ Neonatal jaundice မွေးကင်းစမှာ အသားဝါက ကြာရှည် ဖြစ်သူတွေက ရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်နေတတ်တယ်။ မွေးရာပါမို့ ပျောက်အောက်တော့ ကုမရပါ။
၄။ Naphthalene ပရုပ်လုံး အနံ့တောင်မှ မတည့်ပါ။
ဘာမှ မဖြစ်သလိုကနေ Hemolysis သွေးနီဥတွေကို ဖျက်ဆီးလို့ Hemolytic anemia သွေးအားနည်း ရောဂါ ဖြစ်လာ နိုင်တယ်။ အသားအရေ ဖြူရော်ရော်ဖြစ်လာမယ်။ မောပမ်းမယ်။ နှလုံးခုန်မြန်မယ်။ အသက်ရှူ မဝဘူး။ အသား ဝါမယ်။ ဆီးအရောင် ရင့်မယ်။ ဘေလုံး ကြီးလာမယ်။
ရောဂါလက္ခဏာ ပြစေမှာတွေကို ရှောင်ကျဉ်-ဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့ ရက်သတ္တ ၁-၂ ပါတ်အတွင်း သက်သာလာမယ်။ သိပ် မဆိုးရင် ဆေးကုစရာတောင် မလိုပါ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေ သွေးနီဥသစ်တွေ ထုတ်လုပ်ပေးနေလိမ့်မယ်။ ကုသရတာက ဆေးဝါးနဲ့ အစားအသောက် ဆင်ခြင်-ရှောင်ကျဉ်ရတာပါ။ ကလေးကာကွယ်ဆေး အားလုံးအပြင် အသဲရောင် အေ၊ ဘီ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးရမယ်။ လိုအပ်လို့ သွေးသွင်းပေးရင် လူကောင်းလို နေနိုင်တယ်။ ကျောက်ကပ် ထိသွားချိန်မှာ Dialysis လုပ်ပေးရမယ်။ တချို့ Spleen ဘေလုံး ထုတ်ပြစ်ရနိုင်တယ်။ Folic acid, Vitamin E တွေ ပေးနိုင်တယ်။
Favism လို့လဲ ခေါ်တယ်။ Favism association ဆိုပြီး အသင်းဖွဲ့ထားတယ်။ သူတို့ကနေ မတည့်တဲ့ ဆေးနာမယ်စာရင်းကို အပြည့်အစုံ ပြောပြထားလို့ ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ ဘာဆေးတွေဆိုတာ တခုခြင်းတော့ မရေးတော့ပါ။ သိလိုသူ မေးပါ။
Acetanilide (ရာဘာ ထုတ်လုပ်ရာတွင် သုံးသည်), Acetylphenylhydrazine (polycythemia ရောဂါအတွက်ဆေး), Acetylsalicylic acid (Aspirin), Aminophenazone (အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး), Antazoline (အလာဂျီ သက်သာဆေး), Arsine (ဓါတုလက်နက်သုံး ဓါတ်ငွေ့), Beta-Naphthol (ဆိုးဆေး), Chloramphenicol (ပဋိဇီဝဆေး), Chloroquine (ငှက်ဖျားဆေး), Ciprofloxacin (ပဋိဇီဝဆေး), Colchicine (ဂေါက်ဆေး), Dapsone (အနာကြီးရောဂါ ဆေး), Dimercaprol (အာဆင်းနစ်၊ ရွှေ၊ ပြဒါး အဆိပ်သင့်ခြင်းတို့အတွက်ဆေး), Diphenhydramine (အလာဂျီ ဆေး), Dopamine (ပါကင်ဆွန်ရောဂါ၊ သွေးတိုးဆေး), Doxorubicin (ကင်ဆာဆေား), Furazolidone (ပဋိဇီဝဆေး), Glibenclamide (ဆီးချိုဆေး), Glucosulfone (အရေပြားနာဆေး), Isobutyl Nitrite (ရှူဆေး), Isoniazid (တီဘီဆေး), Menadione (ဗီတာမင်ကေ), Mepacrine (သံချဆေး), Mesalazine-5-Aminosalicylic Acid (အူရောဂါဆေး), Methyltioninium Chloride (methylene blue) (ငှက်ဖျား၊ ကင်ဆာ၊ အဆိပ်ဖြေဆေး), Nalidixic Acid (ပဋိဇီဝဆေး), Naphtalene (ပရုပ်), Niridazole (သန်ချဆေး), Nitrofural (ပဋိဇီဝဆေး), Nitrofurantoin Nitrofurantoin, Norfloxacin (ပဋိဇီဝဆေး), Urate (ဂေါက်ရောဂါတွင်ဖြစ်သည့်ဆား), Pamaquine (ငှက်ဖျားဆေး), Para-Aminobenzoic Acid (အစာလမ်းရောဂါ၊ အရေပြားနာဆေး), Paracetamol (ပါရာစီတမော အကိုက်-အဖျားဆေး), Pentaquine (ငှက်ဖျားဆေး), Phenacetin, Phenazone, Phenazopyridine, Phenylbutazone, Phenytoin, Phynylhydrazine, Primaquine (ငှက်ဖျားဆေး), Probenecid, Procainamide, Proguanil (ငှက်ဖျားဆေး), Pyrimethamine, Quinidine, Quinine (ငှက်ဖျားဆေး), Stibophen, Streptomycin (ပဋိဇီဝဆေး), Sulfacetamide (ပဋိဇီဝဆေး), Sulfacytine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfadiazine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfadimidine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfafurazole (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfaguanidine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfamerazine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfamethoxazole (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfamethoxypyridazine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfanilamide (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfapyridine (ဆာလ်ဖါဆေး), Sulfasalazine (ပဋိဇီဝဆေး), Salazosulfapyridine (ဆာလ်ဖါဆေး), Thiazosulfone Thiazosulfone, Tiaprofenic Acid (အနာ-အဖျားဆေး), Tolonium Chloride (ဆိုးဆေး), Trihexyphynidyl (ပါကင်ဆိုနဇင်ဆေး), Trimethoprim (Septin ထဲပါသည့် ပဋိဇီဝဆေး), Trinitrotoluene (ဖေါက်ခွဲပစ္စည်း), Tripelennamine (စိတ်ရောဂါဆေး), Vitamin C, Vitamin K1, Vitamin K3, Vitamin K4
ဖတ်မိတဲ့ IDIOMS စကားလုံးလေးတွေ - 1
ခြင်္သေ့ရဲ့ ဝေပုံစု လို့ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုနိုင်ပေမဲ့ Idioms အသုံးအနေနဲ့က ဝေစုခွဲရာမှာ မတရားတာမှန်ပေ မယ့် ကိုယ့်အဖို့အများဆုံးကျန်အောင် ဝေပုံကျကို ခွဲယူခြင်း လို့ဆိုလိုပါတယ်။
ဘာသာရေးအထွတ်အမြတ်အဖြစ်ထားတဲ့နွား လို့တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုနိုင်ပေမဲ့ Idioms အသုံး အနေနဲ့က ဝေဖန်ခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်း၊ ပြက်ရယ်ပြုခြင်း ခံထိုက်သည့်တိုင်အောင် အခြားသူတွေက မထိရဲ၊ မဝေဖန်ရဲသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အရာ ကိုဆိုလိုပါတယ်။
အမည်းရောင် မြင်း လို့တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုနိုင်ပေမဲ့ Idioms အသုံး အနေနဲ့က ခန့်မှန်းထားသည့်အထဲမှ မဟုတ်ဘဲ အနိုင်ရလာသူ ကိုဆိုလိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလောကမှာလည်း အများလူထုက မသိကြသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဟာ နာမည်ရပြီးသားနိုင်ငံရေးသမားတွေကို ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရ တာကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဦးထုပ်ကို လက်ဆင့်ကမ်းခြင်း လို့တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုနိုင်ပေမဲ့ Idioms အသုံး အနေနဲ့က အလှူတွေ၊ နာရေးတွေမှာ ငွေကူညီထောက်ပံ့ပေးတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဦးထုပ်ကို ချွတ်လိုက်ခြင်း လို့တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုနိုင်ပေမဲ့ Idioms အသုံး အနေနဲ့က စွမ်းဆောင်ချက် တစ်ခုခုအတွက် လက်ဖျားခါရလောက်အောင် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချီးကျူးရတဲ့ သဘောကို ဆိုလိုပါတယ်။
All Post Titles from My Blog
Android Games (7)
Application ဆိုင်ရာများ ( 11 )
Blog ဆိုင်ရာများ ( 20 )
Chat ဆိုင်ရာများ (7)
Computer အထွေထွေ ( 16 )
HTML Basic (7)
Internet အသုံးပြုခြင်း ( 32 )
ios ဆိုင်ရာ ( 1 )
Kali အကြောင်းသိကောင်းစရာ (3)
Keyloggers ( 1 )
Mobile Phone အချက်အလက်များ (2)
Mobile အထွေထွေ ( 11 )
Network ချိတ်ဆက်ခြင်း ( 13 )
PDF tip (2)
Wifi ဆိုင်ရာ ( 10 )
ကဗျာများ (7)
ကျန်းမာရေး (2)
စာအုပ်စင် (6)
ဆရာဇော်ဂျီ ကဗျာများ (3)
ပုံပြင်များ (3)
ဗဟုသုတ ( 12 )
ဘာသာရေး ( 1 )
သတင်းများ ( 12 )
သို့.... (9)
ဟာသလေးတွေ (3)
အတွေးလေးတွေ ( 17 )
အမေးအဖြေ (2)
အရေးပေါ် (3)
ဆေးပညာ (6)
ဆောင်းပါး (4)
+/- ဘာသာရေး Site များ
+/- Blog အတွက် Link များ
BlogU creative blogging
500+ Named Colours Codes Fonts 500
Header Image Maker For Blogs
Post&Page View Counter
+/- ဗဟုသုတ Site များ
+/- နည်းပညာ Site များ
Creation for life!
+/- သတင်းWebsite များ
Hot News သတင်းဂျာနယ်
7 Day New journal
Myanmar Daily .net
+/- Forum(ဖိုရမ်) များ
+/- သီချင်း Site များ
တင်သမျှ Facebook မှဖတ်လိုလျှင် Like ကိုနှိပ်ပေးစေချင်ပါတယ် ...။
Email ပို့ပေးစေချင်ရင် Email ထားပေးထားခဲ့ပါ:
free.idea2012@gmail.com. Powered by Blogger.